Kudzingiswa haina kushandiswa | Apg29
Kudzingiswa haagoni kubereka kwamuri zvakare, asi inogona Jesu Kristu.
Pakupera kwevhiki rino, kwakasarudzwa panguva Center Party musangano kuti vachaita basa kurambidza yokudzingiswa vakomana dzisingaitwi zvokurapa.
VaGaratiya 6:15. Nokuti muna Kristu Jesu kudzingiswa kana chikanda pasina kushandiswa, asi chisikwa chitsva.
The Center asarudza pamusoro bato rake musangano kuti vanoda kurambidza yokudzingiswa vakomana. The utungamiriri bato iri kuyambira kuti zvichaita kuonekwa sezvo bato achida kurambidza chiJudha uye Islam.
Asi maererano neBhaibheri, saka kudzingiswa haina kushandiswa. Hazvigoni kuponesa. Chete anogona kuponesa ndiJesu Kristu.
The Center akasarudza kurambizwe
The zveutungamiri bato aisada ichi, uye Centre Party mutungamiri Annie Lööf akati pashure kuti iye kumbodemba chisarudzo.
Zvino anouya mubvunzo, naiyewo Moderate Party, iro rave misangano shomanana. Zviri Anna de Sillen uye Maria Gilstig kubva Sörmland kunge pasi mumwe inofamba kuti kurambizwe kudzingiswa kana nokuda kwezvikonzero zvokurapa.
Chokwadi, mapoka vechiJudha uye vaMuslim rokurwadzisa, izvo ndinogona kunzwisisa, asi maererano Bhaibheri harisi kudzingiswa aponese asi pamusoro uri chisikwa chitsva muna Kristu kana kwete.
Kudzingiswa haagoni kubereka kwamuri zvakare, asi inogona Jesu Kristu. Ndiye iye uzvigamuchire kana uchida kuponeswa.
The Bible rinoti:
1VaK 7:19. Dzingiso zvinoreva chinhu, uye chikanda hazvirevi chinhu, asi kuchengeta mirairo yaMwari.
VaGaratiya 5: 6th Nokuti muna Kristu Jesu kudzingiswa kana yechikanda chinhu, asi rutendo rwunobata nerudo.
VaGaratiya 5:11. Uye ini, hama, kana ndichiri kuparidza dzingiso, ndatambudzika ndichiri kutambudzwa? Zvadaro zvingava kugumbusa kwomuchinjikwa kure.
VaGaratiya 6:12. Vose vaya vanoda kuva vakanaka panyama, ndivo vanokurovererai kuti mudzingiswe chete nokuti havangagamuchiri kutambudzwa nokuda kwomuchinjikwa waKristu nokuda.
VaKorose 2:11. Maari makadzingiswawo nokudzingiswa vokudzingiswa isina kuitwa nemaoko, asi pamwe kudzingiswa kwaKristu, ipapo pakubvisa muviri nyama wechivi.
Tinoona kuti Bhaibheri rinonyatsotaura hamugoni kuponeswa kudzingiswa, asi ruponeso zvinoenderana kana uine Jesu kana kuti kwete.
Asi pakanga vanhu muBhaibheri vaida kumanikidza kudzingiswa vatendi. Nokuti vakati vasingagoni kuponeswa zvimwe. Unogona kuverenga muna Mabasa 15: 1-2:
1. Vamwe vakaburuka kubva kuJudhiya, vakadzidzisa hama vachiti: Kana iwe Musarega kudzingiswa maererano netsika yakadzidziswa naMozisi hamugoni kuponeswa.
2. Zvino kwakamuka kusawirirana, uye Pauro naBhanabhasi vakapinda chakakomba nharo navo. Vakasarudza kuti Pauro naBhanabhasi nevamwe vavo vaifamba kuvaapostora nevarume vakuru vaiva muJerusarema pamusoro nyaya iri anokakavara.
Ona kuti inoti "netsika Mosesi" , kwete "mutemo waMosesi ..." Mushure vapostori vakanga vakwira kuJerusarema, vakasarudza, pamwe noMweya Mutsvene,
Mabasa 15: 28-29. Nokuti Mweya Mutsvene uye tasarudza kwete kuti tirege kukuremedzai nomutoro upi zvawo kunze izvi zvakakodzera:
Saka tinoona kuti chinhu manyepo kuti mudzingiswe kuti vaponeswe. The chete nzira vaponeswe kugamuchira Jesu Kristu uye kutenda maari.
The gakava havafaniri kungosiyiwa
Asi gakava enyika kuSweden kungasava sezvisingakuvadzi. Pamwe nguva inotevera vandorwa ruponeso chaiyo inokosha zvinhu, zvakafanana kuti iwe unogona kutenda muna Jesu, kana kuti haugoni kudzidzisa vana kuti vatende muna Jesu, saka zvinova zvechokwadi ngozi.
Ngatinyengetererei Sweden uye vanhu vayo. Ngatinyengeterei enyika yedu kuitira kuti havafaniri kuita zvisarudzo vaende kundorwa Jesu Bhaibheri. Ngatinyengeterei kuti Mwari achaita sezvo chapupu atumire vashandi mukukohwa kwake uye kundoparidza nezvaJesu kuitira kuti vanhu vachakwanisa vamugamuchire zvavari kuitira kuti vagoponeswa.